ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
တွမ်ဒေးဗီးစ်ကကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Michael Obafemi ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Tomas Soucek ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
မီလန် Skriniar ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ရောမ Burki ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အားလုံးGhanian ဘောလုံးကစားသမားများIvory Coast ဘောလုံးကစားသမားများနိုင်ဂျီးရီးယားဘောလုံးကစားသမားဆီနီဂေါဘောလုံးဘောလုံးကစားသမားများ
ဂျော်ဒန် Ayew ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Ismaila Sarr ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
အိန်ဂျယ် Correa ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Duvan Zapata ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Giovani Lo Celso ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အကြောင်းမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Papu Gomez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးနာမတော်ဖြင့်လူသိများသည်သူအပြည့်အဝပုံပြင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ Genius တင်ဆက်; "The New Thuram"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Pavard ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) များစွာသောအခြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိ 2018 ကမ္ဘာ့ဖလား Fame အပေါင်းတို့နှင့်တကွစစ်ရာထူးအတွက်ဘက်စုံအကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
အဆိုပါပြင်သစ်ပြည့်ပြန်သူရဲကောင်း, ဗင်္ယာမိန် Pavard Maubeuge, Nord, ပြင်သစ်အတွက် 28 မတ်လ 1996 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံသည်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘများအားဖြင့်နှိမ့်ချစကနေကြီးပြင်းခဲ့သည်။
ဘေးဖယ်နှိမ့်ချစ, Pavard ရဲ့အဖေအစောပိုင်းမှာမိမိချစ်ရာသခင်သည်သား၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အုတ်မြစ်ချ။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကထည့်လေ့မရှိသကဲ့သို့၎င်း,
''အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနေ့တိုင်းငါ့ကိုထဲကယူသုံးငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာထားဒါကြောင့်ပါပဲ။ ငါ့ဘောလုံးအငယ်စဉ်အခါမျှကစားစရာသို့မဟုတ်ဂိမ်းရှိခဲ့သည်။ ငါသူလုပ်ခဲ့တယ်အရာအားလုံးတို့အတွက်လုံးဝကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ငါ့အဖေကအမြဲငါ့ကိုတွန်း။ သူ့ကိုသာမရှိရင်ငါအခုထိပေါ် im သောဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခရီးရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မယ်။ ''
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, သူ 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားတစ်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Pavard ရဲ့ကစားနိုင်စွမ်းနှင့်အလားအလာအဖြစ်ကွင်းကိုချွတ်သည်သူ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့, အထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံတည်ဆောက်ကြလော့။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်အောက်ပါပုံရာခေလသည် Legrain-Trapani ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Pavard ၏ရည်းစားဖြစ်ပါတယ်။
ကနဦးကိစ္စ္စအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းပြီးနောက် Legrain-Trapani နှင့် Pavard မေလ 2018 မှာသူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူအများပြည်သူသွား၏။ Legrain- Trapani ဟောင်းတစ်ဦးအလှတရားအလှမယ် titleholder (အလှမယ်ပြင်သစ်, 2007) ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားမတိုင်မီသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူသွားဖယ်ရာခေလ Legrain-Trapani သူမကပြင်သစ်ရဲ့ 4-3 စဉ်အတွင်း Pavard ရဲ့ရည်းစားရုရှားနိုင်ငံ 16 ၏နောက်ဆုံး 2018 အတွက်အာဂျင်တီးနားကျော်အနိုင်ရခဲ့သည်ကိုသိရန်ရတယ်သူကမ္ဘာ့ဖလား၏မျက်စိဖမ်းမိ။ သူမသည်ရပ်တည်ချက်ကနေသူမကို beau အပေါ်မှီဝဲခြင်းအဖြစ်သူမစိုက်ကြော့ကြည့်ရှုကြ၏။
နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပေါ်တွင်တည်ဆောက်သောအစိုင်အခဲဆကျဆံရေး။ ရာခေလသည်မိတ်ကပ်မပါဘဲသူမ၏ထံမှအဖြစ်သိသာသူမ၏ယောက်ျားသည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းထက်ခုနစ်နှစ်အဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေသူမအောက်ကဓါတ်ပုံကိုထင်ရှားအဖြစ်သဘာဝကျကျလှပသောကြည့်ရှုသည်။ Legrain- Trapani ၏သဘာဝအလှတရားဟာသူမ၏အလှမယ်ပြင်သစ် 2007 အနိုင်ရဘို့အကြောင်းပြချက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Pavard သူမ၏နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိမိအ Girlfriend, Legrain-Trapani အကြောင်းပိုမို
အဆိုပါအနက်ရောင်ဆံရှင်အလှတရားတစ်ခုစိတ်အားထက်သန်အားကစားသမားသူ့ကိုယ်သူ, အားကစားကြယ်ပွများအတွက်အရာရှိခြင်း, အခြို့က high-profile ကိုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ရပြီမှလူသိများသည်။ 2007-2009 မှစ. Legrain-Trapani အလွန်အမင်းစိတ်ခံစားမှု Ladji Doucouréတစ်ခုအားကစားကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရက်စွဲပါ။
2013 ခုနှစ်တွင်သူမ Saint-Florent-le-Vieil ၏ Abbey မှာသဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမင်္ဂလာဆောင်ဟောင်း FC အသင်း Nantes ကစားသမားAurélien Capoue လက်ထပ်ခဲ့သည်။
2016 မှာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးနှင့် 2007 အလှမယ်ပြင်သစ်အလှတရားပေါ်တွင်အချိန်ခေါ် pair တစုံကိုထပ်ပြန်စျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကနဦးကိစ္စ္စအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းပြီးနောက် Legrain-Trapani နှင့် Pavard အများပြည်သူသွား၏ မေလ 2018 မှာသူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအတူ။
သူမ၏အမြစ်များအကြောင်း: ရာခေလသည် Legrain-Trapani သြဂုတ်လ 31, 1988 အပေါ် Saint-Saulve တှငျမှေးဖှားခဲ့သူကိုအီတလီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏သမီးဖြစ်ပါသည်။ သူမပါသေးတဲ့ကလေးမလေးအခါရာခေလ၏မိဘများကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။ သူမ၏မိခင်, Silvana သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားဖြင့်ရာခေလသည်လူအပေါင်းတို့အတွင်းရေးမှူးထမြောက်တော်မူသောသူသည်။ သူမသည်နှစ်ခုဝက်ကညီအစ်ကိုတွေအမည်ရရုဗင်နှင့် Melvin ရှိပါတယ်။ အောက်ကဓါတ်ပုံကိုကြည့်, သင်ခဲမိခင်နှင့်သမီးသူသည်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
Pavard အသက်အရွယ် 2002 အခါယခုနှစ်6ခုနှစ်တွင်, ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုသူ့အခွက်တခုအဖြစ်ဖို့ဇာတ်စင်ပေးတဲ့သူဒေသခံတစ်ဦးလူငယ်အဖွဲ့ကအမေရိကန် Jeumont ၏တန်းစီဇယားအပေါ်စာရင်းသွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
10 ၏အသက်အရွယ်မှာသူ့မိဘတစ်ဦးအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှသူတို့၏သားရွေ့လျားဆင်ခြင်၏။ သူတို့နေဆဲသူတို့၏သားကြောင်းအသက်အရွယ်မှာဘော်ဒါကျောင်းကိုတက်ရောက်ရန်လိုခငျြသောကွောငျ့, နှစ်ဦးစလုံးမိဘများ Pavard ယှဉ်ပြိုင်ဘောလုံးကစားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ကြောငျးအတှကျရှာတော့တယ်။ လိုင်လီဘောလုံးအကယ်ဒမီအနီးတစ်ဦးကဘော်ဒါကျောင်းမှာသူ့မိဘ '' Preferences ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Pavard သူလွန်ရာလိုင်လီအကယ်ဒမီကနေစမ်းသပ်မှုတွေတက်ရောက်ရန်ခဲ့ရသည်။ ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်ကထည့်လေ့မရှိသကဲ့သို့၎င်း,
ငါစောစောစီးစီးအိမ်ကထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်မမိဘတွေငါ့ကိုမကြည့်ဖို့အတော်ကြာကီလိုမီတာနှင့်သွားလာလျက်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ငါသူတို့အကြှနျုပျအဘို့အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုလုံလောက်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်တော့မည်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
လိုင်လီမှာနေစဉ်, လိုလားသူသွား၏ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Pavard ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပဲသွားတာဖန်စီမရဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကသူက steely သိမ်းယူ မိမိအအကြီးတန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအိပ်မက်တွေကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အကယ်ဒမီမှာဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 10 နှစ်ကြာအပြီးစစ်မှန်တဲ့လာကြ၏။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေးအကျဉ်းချုပ်
နှစ်ခုရာသီကျော်လိုင်လီများအတွက် 25 ကြိမ်ပေါ်ထွန်းပြီးနောက် Pavard ဦးပထမဦးဆုံးအသင်းဘောလုံးမရှိခြင်းကြောင့်ကလပ်များအတွက်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းခံစားရတော့တယ်။ Pavard 2016 အတွက်စတုဂတ် join ဖို့ကလပ်ထားခဲ့တယ်။ ဂျာမနီမှာတော့ Pavard အိမ်မှာပိုပြီးခံစားရတယ်။ သူ 2016 / 17 ရာသီအတွက်ဘွန်ဒစ်လီဂါမှမြှင့်တင်ရေးအနိုင်ရဖို့စတုဂတ်အသင်းကိုဦးဆောင်သောအခါသူ (အောက်တွင်ပုံ) မိမိမိခင်နှင့်ဖခင်မှပျော်ရွှင်မှုကိုမှဤမျှလောက်ဆောင်ခဲ့လေ၏။
"အရာအားလုံးကိုက်ညီ။ အဆိုပါမြို့အများကြီးပေးထားပါတယ် "အားကစားကွင်းအမြဲအပြည့်အဝဖြစ်ပြီး, ငါနည်းပြ၏ယုံကြည်မှု, ငါ့အသင်းဖော်များနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှ Rising
ရုရှားနိုင်ငံအတွက် 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားမတိုင်မှီ, သူ့ကလပ် VfB စတုဂတ်များအတွက်ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Pavard ရဲ့စွမ်းရည်ဘောလုံးကိုကိုင်တွယ်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်အချိုးကျခဲ့ပါတယ်။ Pavard 2017 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြင်သစ်အကြီးတန်းအမျိုးသားရေးအသင်းတက်သည်ကိုခေါ်ခဲ့သည်သောအခါသူတစ်ဦးဘာသာစကားဂြာမနျလူတနျးစားအပြီးနေ့လယ်စာစားရှိခြင်းခံခဲ့ရမိမိမိဘများအနေဖြင့်အများအပြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလွဲချော်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိကြဘူး။
သူကနောက်ဆုံးတော့ရုရှားက 2018 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလားမှာယောက်ျားလေးကိုချွတ်ပေးခဲ့ကတည်းကလုပ်လေ၏အားလုံးသည်ယဇျပူဇျော။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard သူ့မိဘ၏တစ်ခုတည်းသောကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ သူမပါအစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မရှိပါတယ်။ သူ့မိသားစုမှာတစ်ဦးကအနီးကပ်ကြည့် Pavard နှင့်သူ၏မိခင်အကြားတစ်ဦးစုံလင်သောအကြံအစည်ဖော်ပြသည်။
Pavard သည်သူ၏ curly ဆံပင်များနှင့်ရှေးခေတ်ဘောလုံးကြည့်ဘို့လူသိများသည်။ သူက "ချစ်စနိုးထားပြီးဂျက်ဖ် Tuche"ပြင်သစ်ဟာသရုပ်ရှင်စီးရီးအတွက် curly ဆံပင်ဖခင်ပြီးနောက်မိမိအပြင်သစ်အသင်းဖော်များက"က Les Tuches။ "
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard သေချာစွာသည်သူ၏ဆရာများ၏မှို, ယခင်ပြင်သစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိတ်ကူးထားပါတယ် လီလီ Thuram။ ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Pavard သည်သူ၏ဆရာထံမှသင်ယူသည်သူ၏အချိန်အများစုကိုဖြုန်း
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Pavard ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
လိုင်လီ OSC ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနို့
Odsonne Edouard ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Marcus Thuram ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Yacine Adli ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Jean-Philippe Mateta ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Dayot Upamecano ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Ibrahima Konate ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Dan-Axel Zagadou ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Boubakary Soumare ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Lys Mousset ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Neal Maupay ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus မရေရာသည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Allan Saint-Maximin ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
Moussa Dembele ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 19, 2020
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 18, 2020
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇူလိုင်လ 8, 2020
Goncalo Guildes Childhoood Story Plus မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 27, 2020
ပြုပြင်နေ့စွဲ: ဇွန်လ 15, 2020
Dimitri Payet ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Franck Ribery ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကီဗင် Gameiro ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Antoine Griezmann ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်